Gootich dhaamsa jabaa qaba! Qeerroo Hubadhu!! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGootich dhaamsa jabaa qaba! Qeerroo Hubadhu!!
Gootich dhaamsa jabaa qaba! Qeerroo Hubadhu!!
“Duula halagaa caalaa duula lammiirraa namatti aggaamamutu wiirtuu lafee dugdaa nama cabsa. Bofa dhagaa jalaa irra isa afaa jaalatu ofirraa loluun rakkisaadhaatii. Humna qabnu hundaa itti kitimnee erga diina lafaan geenyee,Dabaan muka qottoo keenyaa mukarraa cite kan nuuf marare fakkaatee qabsoo keenya guyyaa saafaa gabaa baasee gurgure. Mar’ataan mataa dhoofnee lafarraa gangalataa ture carraa argateen biyyoo arraabee, hadhaa summii kan durii irra daran hammaatu kuufatee, haaloo kulkulfatee nutti deebi’e. Harkaa waa’ee Bofa bitee mana kaa’ee…
Waraanni suuraan kanarratti argitan duula diinaa marsaa hedduu irra aanee garuu shira firri ittiin nusakaaleen bitintiree kufaatii badiinsaa dandamatee ka’e. Oromoon burjaajii wal dura dhaabbannaa quba walii kutee nyaatuutti seenee, daldaltoonni siyaasaa warri nuuf quuqamoo fakkaatanii dhiiga keenyaan kuma kitila buufatan OPDOf qawwee mitii surreeyyuu nihiikkanna jedhanii; nut gufuu bilisummaa Saba Oromoo akka taane hawaasa bal’aa kana dogoggorsuun imala bara dheeraa guduunfaa argatuuf dhiyaate becencersuuf karaa qabaniifi afaan qaban hundaan nutti baafatan. Jeedala Gogaa Hoolaan Mooraa Hoolotaa seene salphaatti adda baasuun ulfaataadha. Ija qaroo barbaada! Madaa guddaa kana qoorsineerra, qaawwa kanaan nutti banames duuchineerra.
Kan hin qoorreefi hin duudne, kan yoomuu hin suphamne godaannisa hamaan tokko, carraan Oromoo bara dhufee dabraa guduunfaa dhabee rimaan dhalachuu didee gatatuu garuu nus nudhaqqabeera. Kana hundaa watwaannee, mar’annee hin gadoodne. Gad qabnee qoricha itti barbaaddanne malee. Bakka silaa kufuuf gatantarre, mucuca gadhee sana cichinee miila jabeeffannee dhaabbachuun bira murre. Kun WBO Jaarmaa Cibiraa Gaara Walali, Cibiraalee akkanaa bakka jiran naannoo isaan jiranii wal bira geenyee kan akkasii siichi dhibbootaan argitu. Kan garaan hammaatu yoo jiraate haabalaqqamu, inni sobaan dhabaman jedhaa turemmoo haa arraabu. Olola si’a kuma maxxansaan oollu, dalagaan lafarratti dhugaa takkittii dhiigaan maxxansineerra. Hadhooftuu dha ammoo liqimsi!
Qeerroon Oromiyaa ammoo of qopheessi, Bofa biyyee arraabee ka’e sana xumura itti goona. Kan reeffakee maxxansuun hiree tolfatee siin hiree sidabarse, kan dhiifama nutu balleesse jedhee barcuma angoo siyaasaatti bahee amma lubbuu sibaasus, hunda argiteetta! Lama nan suufaniin mammaaksa, nullee akka Sabaatti kuma lamayyuu waan suufamnedha. Garuu kuma lamaafi lama akka nun suufne. WBOn haqa hin sharafu, kallattii dhaabni siyaasaa Oromoo kamuu ykn nam tokkeen kennu har’a bu’aa gidduugaleessa kan godhatte ta’uu nurra gaheetu argine. Carraan dhukkubni coronna virus/ covid 19 mootummaa abbaa irreef fide dhukkubicha caalaa lafarraa akka nuduuguugan godheera. Filmaata tokko qofaa qabna: harka marannee teenyee dhumuu ykn falmannee keessaa bahuu! Yoo Falmaa filannemmoo teenyee wal irratti ilaaluun fafa. Duulli inni miilanaa duula qeerroo ykn WBO ykn ammoo godina kanaa fi sanaa kan jedhu miti; duula namummaa Oromummaa keenyarratti qiyaafatedha. Inni har’a nabira jiru yoo anaan cabsuutti milkaahe boru ammoo sitti balbala rukuta.
Furmaanni fincilaafi Lola waliin dabaallee Qaanii gabrummaa Addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne akka Sabaatti keessa jirru keessaa walbaasuudha! Boru miti iftaan, har’a yeroon isaa!! Dhaamsa darbu walirraa haacaqafannu! Dogoggora nuburjaajessu kamiifuu hulaan tokko hanga qaawwa lilmeellee akkan banamne. Kan hidhameef ‘Free’ abaluu jennee nama hin kadhannu itti cabsinee hidhaa baafanna, kan kufe suuraa maxxansinee teenyee boohichaan hin gororru gootummaan dhaadannee irraan tarkaanfannee gumaa baasuun wareegamasaaniitti ija goona! Oromoo gara rarraga bilisummaatti geessuun nagaa waaraa gonfachiifna, namummaa akka namaatti waakkatamne deebisuun Gonfoo walqixxummaa mataatti keeyyanna!
Of Qopheessi Qeerroo Dachee Oromiyaa Durakee Waa Jira…”
Marroo Dirribaa Lammeessaa
ቴሌቪዥን_ትግራይ፡ላለፉት ሁለት ዓስርት ዓመታት በሃገሪቱ ተግባራዊ የተደረገው ህብረብሄራዊ የፌደራሊዝም ስርኣቱ…ዳውድ ኢብሳ ፖለቲከኛ
Ibsa Amnist International baase”
MARII ADDAA: Obbo Bekele Gerba, Prof. Ezekiel Gebissa, Dr Henok Gabisa (12/5/2020)
Must listen: Kello Media – Marii Addaa: Obbo Bekele, Ezekiel fi Henok
በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ መንግሥት የሚጠቀመው ሥልጣን፣ ሕጋዊ መሠረት ያለው መንግሥት ሥልጣን ነው እንጂ ያልተመረጠ መንግሥት ሥልጣን አይደለም።